qoraalada rakibo ee ahama bamka culus multistage
Notes Rakibaadda ee ahama Steel Multistage qaybin saar: 1. Laga soo bilaabo ahama technology bamka rakibo culus ee ka multistage, iyo biibiilaha nuugid u baahan yahay xaalad adag shaabadda, ma yeelan karaan dillaac ama biibiile ama baxsiga, haddii kale wuu wada baabbi'in doonaa degree vacuum at i biyaha ah ...
Waa maxay habka imtixaanka bamka culus?
Sida caadiga ah, Imtixaanka saar qaybin The dar Test Nooca iyo Test Factory: nooca imtixaanka ─ Baaritaanka Nooca imtixaanka bamka culus ee ka mid ah: socda baaritaan, baaritaanka qaab iyo imtixaanka captivation iyo imtixaanka gariirka buuqa, iwm A: imtixaanka orodka The Marka socda baaritaan, hubi waa in kaca heerkulka bamka ...
dayactirka bamka qaybin u qaybsan yahay hoose iyo sare, iyo waxa ku jira oo gaar ah lagu dari doonaa?
dayactirka bamka qaybin u qaybsan yahay hoose iyo sare, iyo waxa ku jira oo gaar ah lagu dari doonaa? Qaybin heer bamka 1 waxyaabaha dayactirka sida soo socota: 1) hubi in aad hubiso in lagu cabayn ma aha gaaban, qanjirka aan eex lahayn, ma Duugga iyo baxsiga waa collar super; 2) hubiyo in ay jirto ...
Digniin! Bambooyin xaalad soo socda waa in si degdeg ah loo joojiyo!
"Haddii aad ka heli mid ka mid ah qodobbada soo socda waa in ay joojiyaan bamka" (1) Bamka waxa uu qabtaa baxsiga biyo; (2) Marka motor ee bamka sigaar cabba ama dab qabsado, (3) saar leeyihiin dhawaaq aan caadi ahayn; (4) Marka heerkulka dhalista soo baxdana-up si deg deg ah ama sigaar cabba, (5) Marka bamka leeyihiin gariirka oo xoog leh,